UMcDonald's urhoxisa i-logo yayo ebonisa ukungahambelani koluntu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
U-McDonald uyaxolisa ngokungabikho kokungcamla ekutshintsheni uphawu lwayo
UManuel Ramirez | | ILogos, I intanethi
Sigqithile kwezi ntsuku ngasemva kweekhonsepthi zabanye amagcisa abaye bathatha ukudideka kwezentlalo ngenxa yecoronavirus ukuya kwiimpawu ezidumileyo. UMcDonald's uzame, kodwa ekugqibeleni kwafuneka ndixolise ngokungabikho kokungcamla.
Iimpawu ziyi ukuthatha ixesha le-coronavirus ukunika "ubuncinci" ukujija iilogo zakho kwaye ke uvumelane nala maxesha matsha. UMcDonald's uzame, kodwa njengoko usenokuthi, yabuyela umva.
Bekuyiveki ephelileyo xa UMcDonald uqalise isibhengezo esitsha apho kukho iingqameko ezimbini zegolide ezidumileyo Babonakala behlukaniswe kakuhle ukuya kwimeko yokuphambuka ekuhlaleni ebekwe kukuvalelwa yedwa; ukuba ngendlela apha siphantse sahamba ngeentsuku ezili-10 eMadrid, eSpain.
Andifuni ukuba ilogo yakho entle idlale iMcDonalds. Ndifuna ukuba ubonelele ngesigidi sokutya simahla kwabo basweleyo. Ndifuna ujike idrive yakho kwiindawo zokuvavanya ezikhuselekileyo. Ndifuna ukuba uphinde uphindele kumxholo webhokisi yokutya eyonwabileyo yabantwana ababambelele ngaphakathi kwi-RN. https://t.co/xgpf2mIaQe
-Laurel Stark Akman (@LaurelLu) Matshi 20, 2020
La Intengiso eyenziwe yi-arhente ye-DPZ & T, yavela kunxibelelwano lwentengiso yokutya okukhawulezayo uphawu lwaseBrazil ngesiqubulo, apho kwathiwa, sinako ukwahlukana okomzuzwana ukuze sikwazi ukuba kunye ngonaphakade. Emva kwempendulo engathandekiyo eluntwini, kuye kwanyanzeleka ukuba basuse kuzo zonke iinethiwekhi zabo zentengiso ukuba intengiso kunye neengqameko zegolide zahlulwe kakuhle.
Ngokujikeleze apha sele benayo edlulileyo igcisa elibonise umbono wakhe omkhulu umxholo weelogo ezithile kunye nenye hlula oonobumba be logo yeGoogle. Izimvo zoyilo, kodwa ezingakhange zisebenzele uMcDonald's kwaye oko kungaphumeleli kakuhle kuluntu.
Ixesha elingafanelekanga loo ntengiso ineengqameko zegolide ezahluliweyo Kwaye isebenzele uthungelwano lwasentlalweni ukubuyisa oko babecinga ngako. Ngokuqinisekileyo ayizukuba luphawu lokugqibela oluya kuzama ukusebenzisa ixesha lecorononavirus ukwenza uphawu. Njengesiqhelo, kufuneka ulumke kakhulu kuba ezo njongo zenkampani zinokujika zibe ngumqobo omkhulu njengoko kwenzekile kuMcDonald's.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » I intanethi » U-McDonald uyaxolisa ngokungabikho kokungcamla ekutshintsheni uphawu lwayo
La matye amancinci aguqulwa abe zizilwanyana ezintle xa zipeyintiwe
IMyuziyam yaseThyssen ibonelela ngezifundo ezikwi-Intanethi: "Ukukhanya kunye nombala wokupeyinta. Intsomi yaseVenice"